Magway – Department of Medical Service
Posted on May 2, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – 063-2025152, 063-2025151, 09-454190007 Fax No – 063-2025150 Email – mthmagway@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – (၁) ဖျားနာရောဂါကုဌာန (၂) ခွဲစိတ်ရောဂါကုဌာန (၃) သားဖွားမီးယပ်ရောဂါကုဌာန (၄) ကလေးရောဂါကုဌာန (၅) ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရိုးရောဂါကုဌာန (၆) မျက်စိရောဂါကုဌာန (၇) သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါကုဌာန (၈) အကြောအဆစ်နှင့် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုသမှုဌာန (၉) ပြင်ပလူနာနှင့် အရေးပေါ်လူနာဌာန (၁၀) ကင်ဆာရောဂါကုသဌာန (၁၁) ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) – ရုံးရပ်ကွက်၊ မင်းတုန်းလမ်း၊ သရက်မြို့။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ – ခရိုက်ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံ၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (ဖုန်းနံပါတ်၊ Fax No – ၀၆၈ ၂၁၅၁၁ Official E mail address – thayetdph @gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – (၁) အထွေထွေရောဂါကုဌာန ( General / Speciality Units ) (၂) သားဖွားမီးယပ်ဌာန (၃) ခွဲစိတ်ဌာန (၄) ကလေးကုသရေးဌာန (၅) အရိုးအကြောကုသရေးဌာန (၆) သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန (၇) ဓါတ်မှန်ဌာန (၈) ရောဂါရှာဖွေရေးဌာန (၉) တီဘီဌာန (၁၀) ငှက်ဖျားဌာန (၁၁) ခုခံကျ/... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) – အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ မြို့မလမ်းနှင့်ထင်းတန်းလမ်း ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၂-၂၁၁၄၇/၀၆၂-၂၁၅၁၁ Fax No – ၀၆၂-၂၁၁၄၇ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – – ဖျားနာကုသဆောင် -ကလေးကုသဆောင် -ခွဲစိတ်ကုသဆောင် -သားဖွားမီးယပ်ဆောင် -အရိုးကုသဆောင် -မျက်စိကုသဆောင် -နား၊နှာခေါင်းလည်ချောင်းဆောင် ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ ၄.၁- General OPD Timetable ( 24 hours ကြည့်ရှု) ၄.၂- Specialist OPD... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ အမှတ်(၂) ၊ မင်းဘူး(စကု)ကားလမ်းမကြီးဘေး ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ Ph- 065 21511 ,065 21037 , 065 21589 Fax No – 065 21037 , 065 21511 ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) ပြင်ပလူနာဌာန ဖျားနာကုသဆောင် ခွဲစိတ်ကုသဆောင် ကလေးကုသဆောင် သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင် နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်း နှင့် လည်ပင်းကုသဆောင် အရိုးကုသဆောင် မျက်စိကုသဆောင် ခွဲစိတ်ခန်း စိတ်ကျန်းမာရေးဌာန သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန အရိုးအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန ဓါတ်မှန်ဌာန ဓါတ်ခွဲဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ General OPD Timetable – ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် မကွေးမြို့၏ အရှေ့မှ အနောက် မြို့လယ်လမ်းဖြစ်သော ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ၁၄ လမ်းမကြီး (၂)ကြားတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆေးရုံကြီး၏ အရှေ့ဘက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ မြောက်ဘက်တွင် ပြည်တော်သာလမ်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ဆေးရုံလမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် (၁၄)လမ်းတို့ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာန – ၀၆၃-၂၅၅၁၁(၁၀၄) ပြင်ပလူနာဌာန ၀၆၃-၂၃၉၆၅ ရုံးဖုန်း – ၀၆၃-၂၆၀၂၉ Fax ဖုန်း ... Read More | Share it now!